news2dago | Jiona 2009
[Ankapobeny ] 26 Jiona, 2009 14:51
Fety manorisory updated!!!
Efa omaly aho no nanoratra fa tapaka foana ny aterineto! Manorisory mihitsy! lol Vokany tsy nety lasa ny lahatsoratra. Dia indro soratako eto indray androany izy ity. Tsy nijery matso aho omaly tsy nanisy sira ny zavatra teny Iavoloha ihany koa mahagaga fa tsy mba nampiraika ahy mihitsy ny fetin'ny 26 jiona ity hatr@ izay nahatsiarovako saina e! Tsy misy hanenenako mihitsy izany ankehitriny satria zavatra saritsary fa tsy tena izy koa aleo tsy manana raha hanana ny ratsy.
Neleoko lavitra nijery ny "hommage" ny MJ tao @ M6 music. Nandeha tao daholo ireo clip nampalaza an'i Bambi nahatsiaro ny fahiny mihitsy nahita ireto dihy mihejankenjana "breakdance" e! Tany an-tsekoly tokoa fahiny dia mifampitsako an'ireny izahay de samy mba mifampipasy eo! lol Takona tanteraka izay fetin'ny fat tany. Manampetra ny zanak'olombelona ary tsy misy haharitra mandrakizay eto. Aza manao ratsy ihany.
Tapaka lalan-drà ihany koa ingahy Ralitera Etienne mpametraka galona ary tsabona eny @ hopitaly soavinandrina izay ankehitriny.
Tapitra! ny ambony eto ambany efa lahatsoratra t@ alakamisy.
Voalohany aloha dia tsy nanagan-tsaina aho satria tsy hitako izay hanaganana saina @ izao raharaha mbola tsy milamina izao. Fetin'ny miaramila hono ny 26 jiona fa tsy fetim-pirenena ka aleo izay vitainy irery ao ny fetiny. Marihiko etona fa tsy nisy miaramila sahy nanohitra mpanjanaka izany teto koa nahoana no izy no hisalovana ny tolona nataony ny mahery fo fahiny.
Faharoa manarak'izay dia nozaraina vola 16 miliary ny miaramila t@ fanonganam-panjakana natao hanambazana ireto mpitam-basy tsy mahay manavaka ny fahavalo sy ny mpivarotra tanidrazana. Mbola manafy ny teniko teo ihany izany oe fetin'ny miaramila izy ity fa tsy fetin'ny malagasy ka aleo vitainy irery ao ny azy.
Farany dia noterena mihitsy izay hanagana saina fa novaliko boraingina ilay mpiasa ny fokontany nanao oe: "Hatsangako io rehefa 500 Ar ny kilao ny vary ary 2500 Ar ny vidin'ny menaka". Mbola mandoalika @ vazaha ve haleotena e! Vita izay ny tagiko.
Hiverenako @ izay ny lohateniko. Sorena ny tena satria dia fanahinina tapahana ny lalana hitohanan'ny fiara sy hasomebiseby ny olona. Tapaka ny lalana mnolona ny gara soarano torak'izany ny etsy @ fiaro ampefiloha manolona ny shoprite io indrindra eny ampovon'ny arabe no atsangana ny lampihazo. Vokany dia mitohana be ny fiara ny lalana rehetra dia tery be avokoa. Inona ary ity hoy ny olona ohatrany fafinaretana ho an'ny sasany ny mahita ity fitohanana be lavareny ity.
Vao manomboka io oa fa mbola aiza rehefa ao aorina kely ao. Vao tsy ela akory izay mantsy no niakatra ny solika.